Nkọwapụta --lọ ọrụ - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd hiwere na August 2004, ọ dị na mpaghara ụlọ ọrụ mmepe mmepe YUEQING. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke 24000 ㎡, na-enwe ntọala 5 na ihe karịrị ndị ọrụ 300. Ọ bụ a na-abụghị na mpaghara enterprise ọkachamara R & D, mmepụta, ahịa na ọrụ mmezi nke pneumatic mmiri.
Ugbu a, anyị na-enye ngwaahịa pneumatic ise, dị ka ọgwụgwọ isi ikuku, akwa ikuku, cylinders, valvụ solenoid, tub PU na egbe ikuku, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị 100 na ọtụtụ puku ihe n'ụwa niile. Anyị agafeela asambodo ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 asambodo njikwa gburugburu ebe obibi na CE markig nke EU. Ọzọkwa anyị bụ National High-tech Enterprise, National Standards emepe emepe nzukọ.
Anyị niile na-ewere "Ọdịmma Dị Elu" dị ka ihe kachasị mkpa, akụkụ ndị bụ isi na-emepụta site na nhazi akpaka, nke na-emesi ịdị mma nke ihe ndị ahụ ike.
Anyị na-ewe ogologo oge n'ule dị ogologo ndụ ma na-ekwusi ike na a ga-enyocha ngwaahịa ọ bụla na anwale tupu nnyefe. Ka ọ dị ugbu a, "Mgbe ọrụ gasịrị" bụ ntinye anyị, n'ihi na anyị maara na ndị ahịa ahụ ga-aghọtacha omume anyị kwesịrị ịrụ ma mepụta ọtụtụ mmeri ọnọdụ.
Footlọ ọrụ akara ukwu
+ R & D njikwa otu
Ikike iche iche
Uru mmepụta kwa afọ
Site na ogo klaasị mbụ, ọrụ klaasị, ọkwa izizi na ndị ahịa ịrụ ọrụ ọnụ iji mepụta ụkpụrụ dị elu
N'ihe banyere itinye ndị mmadụ n'ọrụ, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ nke "ndị mmadụ na-elekwasị anya" ma na-agbaso ụkpụrụ ọrụ nke "ndị mmadụ na-eme ike ha niile, ọnụọgụ bara uru". Na nhọpụta ma ọ bụ nkwalite nke onyinye, anyị na-ekwusi ike mgbe niile na "ndị ruru eru, ndị mmadụ," The mediocrity "anaghị ele ndị ikwu, ndị enyi, mmekọrịta, mmekọrịta, na nzụlite nke ọrụ ndị mmadụ anya, kama ọ na-elekwasị anya na ikike nke ndị ọrụ , na-a attentiona ntị na arụmọrụ, agụmakwụkwọ dị mfe, ịrụsi ọrụ ike, na afọ dị mfe, na-agbaso "ikpe ziri ezi, ikpe ziri ezi, na imeghe." Principlekpụrụ nke asọmpi, mma.
N'ihe gbasara ọzụzụ ndị ọrụ, anyị na-enyocha ịdị irè nke ọzụzụ site na ngwa mmụta dị iche iche, nkuzi CD-ROM, na gafere ule mgbe amụrụ ihe. Anyị na-agba ma na-agba ndị ọrụ nwere ume ume ma na-agba ndị ọkachamara ume ikwu okwu maka ndị ọrụ.
Mịpụta uchu ngwaahịa ingmepụta ilekọta Enterprise
Ezi ọrụ Ntị Ọrụ Dị Uchu Ọrụ Corporate Spirit